मानव जीवनकै सबैभन्दा स्वर्णिम उमेर कुन होला ? कहिल्यै यसरी सोच्नु भएको छ ? कतिपयले भन्छन्, ‘जीवन त ४० वर्षपछि सुरु हुन्छ । अहिलेको ६० वर्ष पहिलेको ५० वर्ष बराबर हो ।’
तर सच्चाई के होला ? जीवन जिउने सबैभन्दा स्वर्णिम उमेर कुन होला ?
बीबीसी फ्यूचरको टीमले मेडिकल लिटरेचरको अध्यन गरी जिन्दगीका हरेक पहेलु जस्तै तपाईंको मस्तिस्क देखि सेक्स चाहनासम्मको विश्लेषण गरेको छ । यसबाट प्राप्त नतिजा भने अचम्ममा पार्ने खालको छ ।
शारीरिक फिटनेसको मापन
शारीरिक फिटनेसको कुरा गर्दा १०० मिटर स्प्रिन्ट दौड, जेबलिङ थ्रो जस्ता स्पोर्ट्समा तपाईं २०-३० वर्षको उमेरमा सबैभन्दा बढी फिट हुनुहुन्छ । यसपछि तपाईंको क्षमतामा तिब्ररुपमा गिरावट आउँछ । तर केही खेलमा भने ३० वर्षमाथिका एथलेटहरुले पनि राम्रो गर्न सक्छन् ।
जस्तो कि म्याराथन दौड, १०० किलोमिटर दौडमा बढी उमेरका खेलाडीहरु नै सफल हुन्छन् । ३०-४० र ४०-५० को उमेर तपाईंको म्याराथन दौडन क्षमता भने विस्तारै ह्रास हुँदै गएको हुन्छ ।
स्मरण रहोस्, ६१ वर्षको उमेर सन्नी म्याकीले करियरकै पहिलो आयरमेन ट्रायथलन रेस जितेकी थिइन् । एथलेटहरु ७० वर्षको उमेरमा पनि पूरा फिट हुन्छन् ।
दिमागी क्षमताको मापन
दिमागी क्षमताका लागि भने २० वर्षभन्दा अघिको उमेर नै सबैभन्दा उत्तम हो । २० वर्षको भएपछि मानिसमा नयाँ तथ्यहरुलाई याद गर्ने क्षमता ह्रास हुन थाल्छ । मस्तिष्कको यस्तो क्षमता तपाईंले स्कूले जीवन पार गर्दा नगर्दै कम हुने अवस्थामा पुग्छ ।
कामकाजी सूचनालाई याद राख्ने क्षमता भने ४० वर्षको उमेरसम्म राम्रो हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै घट्न थाल्छ । मानिस युवाअवस्थामा रचनात्मक मानसिकतामा भने सबैभन्दा स्वर्णिम क्षणमा हुन्छ । प्रायजसो नोभेल प्राइज विजेताहरुले ४० वर्षको उमेरकै हाराहारीमा यो सफलता चुमेका थिए । ४० वर्षपछि भने स्मरण शक्ति धिमा बन्न थाल्छ ।
उमेर बढेसँग तथ्यलाई यादराख्न गाह्रो भएपनि मानिसको कुशलता भने बढ्छ । पढ्ने बानी होस् या अंक गणितको समस्या होस्, त्यसमा तपाईं राम्रो गर्न थाल्नुहुन्छ । मिडिल एजमा मानिसको तर्क गर्ने क्षमता भने बढ्छ ।
मुश्किल परिस्थितिमा हल निकाल्ने क्षमता पनि उमेरसँगै बढ्दै जान्छ । यसै सम्बधमा रिसर्च गरेका हवार्ड यूनिभर्सिटीका जोश हारटशोर्न भन्छन्, ‘यस्को कुनै उमेर छैन, जुन उमेरमा हरचिजमा पर्फेक्ट होस् । धेरै चिजमा एकै पटक उत्कृष्ट हुने उमेर पनि खासै छैन ।’
बढ्दो उमेर र सेक्सको चाहनाका विषयमा मिलेको जानकारी भने मानिसलाई खुसी पार्ने खालको छ । ६५-७४ वर्षका ३० प्रतिशत मानिस हप्तामा १ पटक सेक्स गर्न सक्छन् । यदि प्राप्त जानकारीलाई मान्ने हो भने सेक्सको चाहनाका हिसाबले मानिस २० देखि ४० वर्षको उमेरमा चरम अवस्थामा हुन्छ ।
सेक्सको चाहना र सेक्स गर्ने क्षमतामा ५० वर्षको उमेरसम्म कुनै कमी आउँदैन । ‘सेक्सुअली एक्टिभ लाइफ एक्सपेक्टेंसी’सँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट अनुसार ५५ वर्षका पुरुषमा त्यसपछिको १५ वर्षसम्म सेक्स गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ भने ५५ वर्षीय महिलाहरु त्यसपछि कम्तिमा १० वर्ष सेक्स गर्ने चाहना राख्छन् ।
६५ वर्षपछि यौन सम्बन्ध गर्ने क्रम कम हुन्छ । तर, ६५ देखि ७४ वर्षका ३० प्रतिशत वृद्धहरु हप्तामा १ पटक सेक्स अनिवार्य गर्छन् । सेक्सको चाहना घट्नुको फाइदा पनि छ । सेक्सको चाहना कम भएसँगै जीवनप्रतिको उत्साहमा भने वृद्धि हुन्छ ।
सेक्सका लागि स्वर्णिम उमेर
सामान्यतया २० देखि ३० वर्षको उमेरमा सेक्सको चाहना सबैभन्दा बढी हुन्छ । साथै ३० देखि ४० वर्षको उमेरमा मानिस सेक्सुअल क्षमतामा सबैभन्दा सक्षम हुन्छ । सेक्सबारे मानसिक रुपमा भने ४० देखि ६० को उमेरमा मानिस निकै राम्रो स्थितिमा रहने गरेको पाइएको छ ।
६० – ७० को बीचमा गरिएको सेक्सका दौरान मानिस सबैभन्दा खुसी हुन्छ । यी सबैबाट प्रस्ट हुन्छ मानव जीवनका तमाम् खुड्किलामा तपाईंको अवस्था बदलिँदै जान्छ ।
यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ जीवन जिउनका लागि कुनै एउटै उत्कृष्ट उमेर छैन । कुनै उमेरमा मानिस केही कुरामा आफ्नो चरमविन्दूमा पुगेको हुन्छन्, अर्को उमेरमा अर्को कुनै कुरामा ।
यद्यपी थोरै कोशिश गरेर हामी पृथ्वीमा आफ्नो समयलाई निकै राम्रो बनाउन सक्छौं । शारीरिक अभ्यास गर्नाले केवल शारीरिक फिटनेसमात्रै होइन डइभेटिज, क्यान्सरजस्ता बिमारीको खतरा पनि कम हुन्छ । साथै स्मरण शक्ति पनि राम्रै रहन्छ ।
स्वस्थ मानिस अन्य भन्दा ५ वर्षबढी सेक्सुअल्ली एक्टिभ रहन सक्छन् । त्यसैले पनि शारीरिक अभ्यास अमृत समान छ ।
मनोवैज्ञानिकहरु मान्छन्, ‘हाम्रो सोचाइले पनि जीवनमा अहम भूमिका खेल्छ । सोचाइकै कारण कोही मानिस उमेरले नेटो काटिसक्दा पनि युवा नै देखिन्छन् । साथै ज्यादा सक्रिय र लामो समय पनि बाँच्छन् ।
त्यसैले बढ्दो उमेरका सीमाहरुलाई ख्याल राख्दै आफ्न हरेक उमेरको मज्जा लिनुस् र त्यसलाई अझै उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गर्नुस् ।
– बीबीसी फ्यूचरमा डेभिड रोबसनको रिपोर्ट